विश्व भूराजनीति, युद्ध एवं नेपालको अवस्था (भाग - ४) - PLA Khabar
विश्व भूराजनीति, युद्ध एवं नेपालको अवस्था (भाग – ४)
अघिल्लो लेखमा विश्व भूराजनीति र युद्ध बारे उजागर गर्ने छौं भनेर उल्लेख गरेका थियौं। आउनुहोस् त्यसै अनुरुप आजको लेख सुरु गरौँ। । जिओपोलिटिक्स अर्थात भूराजनीति; यो शब्द कमजोर, गरिब र पिछडिएका देशहरूको शब्दकोशमा हुँदैन । शक्तिशाली राष्ट्रहरुले भूगोलमा कसरी आफ्नो आधिपत्य जमाउने ? कसरी आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने? यस बारेमा चाल्ने कदमहरु नै भूराजनीति हुन् । संक्षिप्तमा भन्नु पर्दा ठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरुले आफ्नो प्रभाव हाबी राख्नको लागि छुट्टाईएको भूगोलको अखडालाई भूराजनीति भनेर बुझ्दा हुन्छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि यो शब्दको प्रयोग बढ्न थालेको हो । मुख्यतयः एउटा शक्तिशाली देशले अर्को शक्तिशाली देशलाई धरासयी पार्नको लागि र आफ्नो शक्तिको प्रभाव, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी देशको वरिपरि कायम गर्नको लागि खेलिने चालको शब्दजाल नै भूराजनीति हो । यसमा जमिन लगायत सामुन्द्रीक क्षेत्रहरुलाई कसरी आफ्नो पकडमा लिने भन्ने दाउ पेचहरु चलिन्छ । एउटा देशले छेक्ने र अर्को देशको छिर्ने प्रयास चलिरहेको हुन्छ र त्यही क्रममा सुरु हुन्छ युद्ध।
आजको लेखमा यही भूराजनीतिको नाममा गरिने विश्वव्यापी आतंक, चलखेल के कसरी हुन्छ ? एजेण्डा ट्वान्टी वानमा विश्वव्यापी युद्ध मचाएर जनसंख्या सफाया को खेला कसरि चल्दै छ ? यस बारेमा प्रष्टता पाउनुहुनेछ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरु एकअर्कासँग लड्ने आँट गर्दैनन्। उनीहरु एकअर्काको प्रभाव निस्तेज पार्दै आफ्नो वर्चस्व फैलाउँछन् । आफ्नो देशभित्र होइन आफ्नो दुश्मन देशभित्र । त्यो देशलाई ध्वस्त/धराशयी पार्नको लागि गरिने राजनीतिक चलखेल नै भूराजनीति हो। आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रलाई घेर्नको लागि उसको छिमेकी राष्ट्रहरुमा व्यापार तथा अन्य प्रायोजनको लागि राजनीतिक, कुटनीतिक सिद्धान्तको प्रयोग गरिन्छ। संसार ब्यापी कम्युनिस्टको एक कित्ता र पुँजीबादीको अर्को कित्ता छ। यिनै सिद्धान्त अन्य देशमा लगाउने र आफ्नो कित्ताको बर्चस्व बढाउने लगायत ती देशहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउने, त्यँहा भएका श्रोतहरु आफुले कब्जा गर्ने र ती देशहरुलाई स्वनिर्णयले केहि पनि गर्न नदिने खेला भूराजनीति अन्तर्गत पर्छ । पहिलाको जमानामा जसरी उपनिवेशिकरण हुन्थ्यो, हाल त्यहि तरिकाले गर्न सम्भव छैन। तर पनि उपनिवेशिकरणको चिन्तन अझै हराएको छैन। यसको स्वरूप र शब्द मात्र फेरिएको छ। ‘भूराजनीति’ यहि हो, नयाँ शब्दजाल जसको माध्यमले वैचारिक र राजनीतिक उपनिवेशीकरण खुलेयाम चलेको छ।
र यही होडबाजीमा प्रतिद्वन्दीको टकरावले युद्धको सृजना गर्दछ ।
आफ्नो वैचारिक प्रभाभ, आफ्नो संस्कृति-सभ्यता को प्रभाव, आफ्नो हातहतियारको शक्ति प्रदर्शन, आफ्नो व्यापारको उदय यी कुराहरु नै भूराजनीति खेलका नियमहरु हुन् ।
अब मूल विषयमा प्रस्थान गरौं । यस खेलका हालका बाहिर देखाइएका जल्दोबल्दो खेलाडीहरू रसिया, चाइना, अमेरिका,युरोप र ईरान हुन् । र यी मध्ये जसको क्षेत्रमा पनि गएर टांग लडाउने, नाक घुसाउने र च्याखे थाप्ने अमेरिका हो । अमेरिका एलिटहरुको संसारमा वर्चस्व कायम गर्ने एउटा संस्था जस्तै हो । बाहिर सुनाउनलाई संसारको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देश भनेर भनिएता पनि, जोन एफ केनेडीको मृत्युपछि यो देशलाई एलिटहरुले संसारमा आफ्नो इच्छा अनुसारको गतिविधि गर्न, दादागिरी देखाएर थर्काउनको लागि प्रयोग गर्दैछन् ।अमेरिकाको करीब ८०० मिलिटरी बेस संसार ब्यापी छन्। राजा बिरेन्द्र मारिनुको प्रमुख मध्यको कारण पनि अमेरिकी सेनाको बेस नेपालमा राख्न नदिएर हो। अन्य कारण हरु पनि छन्, ती भविष्यमा बताउने नै छौं।
संसारभरी जे-जस्तो गतिविधि भए पनि त्यसको मूल्य अर्थात् पैसा जति सबै एलिटहरुकै अधीनमा आउनुपर्ने उनीहरूको नियम हो। देशहरुलाई एकअर्कासँग लडाउने र हात हतियारको साथ् ऋण पनि यिनीहरूले नै दिलाउने गर्छन् । नेपोलियन बोनापार्टको पालादेखि यिनीहरुले यो धन्दा चलाउँदै आइरहेका छन् । हरेक किसिमका हातहतियार कम्पनीहरुमा यिनीहरूको लगानी रहेको हुन्छ । हरेक देशले हात हतियारको कारोबार लगायत अन्य ब्यापार गर्दा यिनीहरूकै बैंकिंग प्रणालीको माध्यमबाट गर्नपर्ने हुन्छ। त्यसैले नै हरेक देश चाहे पनि नचाहे पनि यिनीहरूकै अधिनमा रहे सरह छ ।
कुन कुन देशलाई लडाउने ? कुन कुन देशलाई अस्थिर गराउने । यो सबै आदेश उनीहरुले नै दिने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्माण गरेर संसार भरि आफ्नो इच्छा अनुसारको नीति नियम लागु गराएर आफ्नो धन्दाहरु विश्वव्यापी चलाउछन्। बाहिर सुनाउनलाई शान्ति सेना आदि नाम दिएपनि सबै एलिट हरुकै योजनामा काम गर्ने सेना हुन्। जुन देशको श्रोत लुट्ने इच्छा हुन्छ , त्यो देशमा विभिन्न अस्थरिता र अराजकता फैलाएर उनीहरु आफ्नो काम गर्छन्।
शक्तिशाली देशहरुका राष्ट्रपति चयनमा पनि उनीहरुकै हात हुन्छ ।
केजीबीको एजेन्ट रहेका भ्लादिमिर पुटिन पनि एलिटहरुको पिउसा हुन् । संयुक्त सोभियत (यु. एस. एस. आर.) रहँदा पुटिनले नै सोभियतको गोप्य सूचनाहरु एलिटहरुलाई दिने गर्थे । चाईनाका राष्ट्रपति हु जिन्ताओ, क्यानाडाका हार्पर, रुसका पुटिन र अमेरिकाका जर्ज बुस लगायत विभिन्न देशका प्रमुखहरुको ग्राण्ड लजमा खिचिएको गोप्य फोटो बाहिरिएको छ । ग्राण्ड लज भनेको एलिटहरुकै एउटा अखाडा हो। जहाँ उनीहरुले आफ्ना पिउसालाई थुपारेर तालिम तथा आदेश दिने गर्छन् ।अमेरिकासँग चिन र रसिया ठुलो दुश्मनलको रूपमा देखाइन्छ। बाहिर हेर्दा चिन अमेरिका, कांग्रेस-कम्युनिस्ट भनेर मिडियाबाजी गर्दिने पनि त्यही एलिटहरुकै मिडिया हुन्। युद्धमा लगानी गर्ने उनीहरुको पुरानो ब्यापार हो। हरेक देशको अर्थतन्त्र वैश्विक स्तर अनुसार मापन गर्दिने, मुद्रा छाप्दिने, मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप मूल्य तय गरिदिने एलिटहरुकै बैंकले हो। त्यसै अनुरुप सबै देश चाहे पनि न चाहे पनि उनीहरुको अधिनमा छ।
अमेरिकाले निहुँ खोजेको जस्तो देखाइएता पनि यी सबै देशहरुलाई एकअर्कासँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने आदेश एलिटहरुबाट नै जारी हुन्छ । ती देशहरु पनि आफू शक्तिशाली देखिनको लागि र आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्य जमाउनको लागि एलिटहरुको आदेश शिरोधार गर्नुको विकल्प छैन ।
एलिटहरुको पकड बाट रसिया र चिन फुत्किने कोसिसमा छन्। त्यसैले चिन लाई घेर्नको लागि हङकङ, ताइवान लगायत दक्षिणी चिनियाँ सागर (साउथ चाइना सी)मा अमेरिकी सेनाको बढ्दै गरेको गतिविधि/ चासोलाई देख्न सकिन्छ ।
चिन र भारत लडाउन पनि उनीहरु तत्पर छन्। माओको कार्यकाल बाटै चिन एलिटको इसारामा चल्ने देश हो। संयुक्त रुस फुटे पछि रुस पनि एलिट हरुकै इसारामा चल्ने हो। अहिले जिनपिङ र पुटिन उनीहरुको पकड बाट उम्किने प्रयासमा छन्।
जुन देश इनिहरुको पकडमा रहेको हुँदैन ती देशलाई आफ्नो मातहतमा लिन को लागि ती देशको वरिपरिका अन्य देशहरुमा यिनीहरु अमेरकि सेना छिराएर बितण्ड मच्चाउँछन्। आफ्नो पकड कमजोर रहेको देशहरुलाई वरिपरिबाट घेर्छन् , ती देशका छिमेकी देशमा अस्थिरता मच्चाउँदै छिर्छन्। छिमेकी देशहरुका सबै प्राकृतिक खनिज लगायतका स्रोतहरू आफ्नो अधिनमा लिन्छन्। उदाहरणको लागि ईरान घेर्नकोलागि सिरिया, इराक,अफगानिस्तान मा भएका गतिविधिहरु देख्न सकिन्छ। यिनीहरुको आदेश नमान्ने हो भने कि त त्यो मान्छे मारिन्छ अथवा उसको शक्ति क्षिण पारिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन, जोन एफ केनेडी, नेपालको शाह बंश, अफगानिस्तानका राजतन्त्र, इराकको राजतन्त्र, लिबियाका गदाफ्फी, इराकका सद्दाम केहि उदाहरण हुन्।
अब यही भूराजनीतिको नाटक द्वारा भएका र भइरहेका युद्धहरूको बारेमा बुझौँ । दोस्रो विश्व युद्ध, खाडीका युद्धहरू, अहिले सिरिया इराक आदि देशमा पनि युद्ध भड्किनुको कारण एलिटहरुको श्रोत कब्जा र पकडमा लिने उदेश्यको लागि हो। सबै खाडी देशहरुमा भएका गतिविधि इजरायल लाई स्थापना गर्ने, इरान घेर्ने चालको लागि भएको थियो। केहि हप्ता अगाडी अर्मेनिया र अजरबैजानमा युद्ध भड्किनुको कारण पनि इरान घेर्नको लागि हो। एलिटहरुको बलियो पकड नरहेको देश मध्ये इरान एक प्रमुख देश हो। त्यसैले इरानलाई आफ्नो अधिनमा लिन हरसम्भव प्रयास चल्दै छ।
अब एजेन्डा २१ को जनसंख्या सफाया र नयाँ वैश्विक संरचनाको लागि युद्ध कसरि प्रयोग हुनेछ यस बारे कुरा गरौँ।
केहि महिना यता बाट पाकिस्तानले यूएनमा इन्डियाले कश्मीर लुटेको र त्यहाँ मानवअधिकारवादी कुराहरुबारे बारम्बार उल्लेख गरेको छ । इन्डियापनि आफू अहिले शक्तिशाली बन्दै गएकाले पाकिस्तान र चीन संग युद्ध गर्न उक्सि रहेको छ । एलिटहरुको योजना संसारको हरेक देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त गरेर इजरायललाई संसारको नयाँ शक्तीको रुपमा स्थापित गर्नु हो । यसैलाई छोटकरीमा निउ वर्ल्ड अर्डर भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसको लागि उनिहरुले एसियामा चीन, रसिया, इरान, टर्की र मध्य पूर्वी (मिडिल इस्ट) राष्ट्रको एउटा गठबन्धन , लगायत इंडिया, युरोप,अमेरिका र इजरायलको अर्को गठबन्धन गरेर इंडिया र चिन क्षेत्रमा युद्ध भड्काउने योजना छ । हरेक किसिमको व्यापार व्यवसायहरु सबै ठप्प भएको अवस्थामा हातहतियारको बिक्री र युद्ध भड्काउने नै अबको अर्थतन्त्र समाल्ने एकमात्र माध्यम भएको छ। इतिहासलाई नियाल्दा जहिले पनि संसारमा ठूलो ठूलो आर्थिक मन्दी हुन्छ, तब युद्ध नै एक मात्र विकल्पको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। आर्थिक मन्दीबाट उठ्न युद्ध गर्नै पर्ने किसिमको वैश्विक अर्थ प्रणाली एलिटहरुले नै डिजाइन गरेका हुन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले चिन को भ्याक्सिन अब सर्वसाधारणमा प्रयोग गर्दा हुन्छ भन्ने अनुमति दिएको खबर चाइनिज मिडियामा बताइएको छ । उता रसियाको भ्याक्सिन पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर रसियाले दाबी गरेतापनि रसियाको विरोधी राष्ट्रहरुले त्यो भ्याक्सिन माथि आशंका लगाएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृति दिएको छैन। यसैलाई नै युद्धको सुरुवाती विन्दुको रुपमा प्रयोग गरिनेछ। भाइरस कहाँबाट फैलियो? चाइनाबाट। कुन देशको भ्याक्सिन सबैभन्दा सुरुमा सर्वसाधारणलाई लगाउन अनुमति दिइयो ? चाइनाको। चाइनाले नै सबै देशको अर्थतन्त्र डुबाउन यो सबै गरेको भन्ने निहु अब बलियो बन्ने छ । धेरै अघि बाट ट्रम्प्लाई यहि बोल्न लगाइएको थियो जुन एउटा साइअप (psychological operation) हो द रेक अफ टाइटेन (टाइटेनिक जहाज डुब्न भन्दा, १४ बर्ष अघि किताबको माध्यमले गरिएको साइअप) जस्तै । तेसरी नि खेल्नको लागि जसले रोग बनायो त्यसैले नै औषधि बनायो। यो दुष्प्रचार गरेर युद्ध सुरु गराउनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले चाइनाको भ्याक्सिनलाई अनुमति दिएको हो।
उता रसियालाई रोक्नुको कारण पनि यताको गठबन्धन तयार पार्नको लागि हो , चाइना रसिया, टर्की, मध्य पूर्वीय राष्ट्र र इरान एकातिर , युरोप अमेरिका, इंडिया र इजरायल अर्को तिर।
केहि दिन एताबाट मुस्लिम राष्ट्रहरुको पनि युरोप बिरोधि आक्रोश सृजना गराउदै गइएको छ। यसले मध्यपूर्वी र टर्की लगायत मुस्लिम राष्ट्रको गठवन्धन तयार पार्दै छ।
हामीले ४ महिना अगाडी एमसीसीको भिडिओमा एजेन्डा २१ को डिपपुलेसन मुद्दा अनुसार संसारको दुइ ठुलो जनसंख्या भएका देशलाई लडाउने योजना छ। त्यसैको लागि नेपालमा एमसीसी लाद्न लागेको भनेर बताएका थियौं। करीब २० हजार अमेरिकी सेना इंडियाको समुन्द्री क्षेत्रमा चाइनलाई हान्ने भनेर तैनाथ भएको छ।
अक्टुबर २२ मा इन्डियन गुप्तचर संस्थाका प्रमुख ‘गोयल’ नेपाल आएर सबै नेतालाई भेटे र फर्किने क्रममा कालापानी हुँदै गए। गोप्य श्रोतका अनुसार त्यो भूभाग इंडियालाई हस्तान्तरण गरिएको सुचना आएको छ। गोयलको जहाजलाई कुटनीतिक प्रतिरक्षा दिइएको थियो, जसमा ठुलो धनराशी आएको छ। त्यस भेट पछि नेपालको नक्साबाट चुच्चो गायब भयो। अब कालापानीमा इन्डियन र अमेरिकी सेना उतार्ने योजना छ। अक्टुबर २५ देखि ३० सम्म इंडिया लगायत हिन्द-प्रशान्त (इन्डो-प्यासिफिक) क्षेत्र भ्रमणमा अमेरिकी राज्य सचिव पोम्पेओ र रक्षा सचिव एस्पेर आउन अगाडी नेपाल मामिला शौम्य पार्ने उद्देस्यले गोयल बालुवाटार लगायत आफ्ना बफादार प्रचण्ड, बाबुरामलाई नेपालमा अब उथल पुथल गर्ने आदेशका साथ् आएका थिए। र एमसीसी पास नगरे ओलीको शक्ति क्षिर्ण गर्ने धम्कि पनि गोयलको माध्यमले अमेरिकाले दिएको छ। इंडियाको गुप्तचर संस्था अमेरिकी हड्डीमा चल्ने संस्था हो। इंडियाको निर्णय वासिंगटनबाट हुने माहोल मिलाउन पोम्पेओ इंडिया भ्रमणमा आएका हुन्।
२७ अक्टुबरमा इंडियाले अमेरिकासंग बेका (BECA, Basic Exchange and Cooperation Agreement) नामको सन्धि गरेको छ, जसले अब इंडियामा अमेरिकी हतियारको हाली मुहाली हुनेछ भने रसिया संगको पुरानो सम्बन्ध खटपट हुनेछ। बेकाको माध्यमले अमेरिकाले इंडिया संग भएका रसियन हतियारको अध्ययन गरेर प्राविधिक ज्ञान लिने योजना राखेको छ। जुन ज्ञान, युद्ध गर्दा रसियन हतियार काट्न प्रयोग गर्ने योजना छ। दक्षिणी चिनी समुन्द्रमा पनि अमेरिकाको करीब १ लाख सेना तत्पर छ। केहि हप्ता अघि अमेरिकी शैन्य जहाज आफ्नो बोर्डर भित्र छिरेकोले चिनले घेरेर फिर्ता पठाईदियो।
चिनलाई हरेक क्षेत्र बाट घेरी सकेको छ , केवल नेपालमा मात्र अमेरिकी सेना आउन नभ्याएको अवस्था हो। त्यसैले एमसीसी पास गराउन दवाव देखि मन्त्रलाय हेरफेर देखि एमसीसी बिरोधी नेतालाई ७२ करोडको सर्पको बुझो, मन्त्रि पदको झटारो मिलाउँदै छ। गोप्य श्रोतका अनुसार संसद्को हिउँदे अदिवेशनमा एमसीसी पास गराउने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले अमेरिकालाई दिएको छ भन्ने खबर आएको छ। उता चिनले एमसीसी र ओली गोयलको सम्झौता रोकाउन माधव कार्ड खेलेको छ। समाचारमा महाभियोग, नयाँ अध्यक्ष वा नयाँ प्रधानमंत्री भन्ने त्रिआयमिय चर्चा चल्दै छ।
यो जाडोमा जनसंख्या सफायाको लागि विश्व ब्यापी भ्याक्सिन पनि प्रयोग गरिने छ, जसको लागि मौसम परिवर्तन (रुगा खोकीको सिजन), जाडोमा फेरी कोरोना सल्कियो भनेर अझै बलियो भाइरस फैलाउने छन् , युद्ध मच्चाएर इंडिया चाइना को ठुलो जनसंख्या लगायत विश्वव्यापी जनसंख्या पनि साफ गर्नेछन्। युद्ध पछि अमेरिकालाई छोडेर इज्रायल लाई अबको नयाँ सुपर पावर बनाउने छन्।
जिओन को उदेश्य न्यु वर्ल्ड अर्डर भनेको द राइज अफ इजरायल हो। जसको सुरुवात आउँदो बर्षको जनवरी २० बाट थालिने छ।
आगामी लेखहरुमा नेपालमा सल्बलाई रहेका ग्रान्ड डिजाइन उजागर गर्ने छौं।
Posted in विचारTagged शिवगौरीदास (अनुप)